काठमाण्डौ । विश्व मुटु महासंघको आह्वानमा सन् २००० को सेप्टेम्बर अन्त्यदेखि मनाउन थालिएको विश्व मुटु दिवस यस वर्ष सेप्टेम्बर २९ तारीखका दिन विश्वभर अर्थात् विश्व मुटु महासंघका १५० भन्दा बढी सदस्य राष्ट्रहरूमा मनाइँदैछ । विश्व मुटु महासंघको सन् २००५ को तथ्याङ्कअनुसार विश्वभर हरेक वर्ष १ करोड ७५ लाख भन्दा बढी मानिसहरूले रक्तनली,...
काठमाण्डौ । नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलले विविध कार्यक्रमका साथ यस वर्षको विश्व मुटु दिवस मनाउने कार्यको शुभारम्भ गरेको छ । यस वर्षको विश्व मुटु दिवस असोज १३ गते शुक्रबारका दिन अर्थात् महानवमीका दिन पर्न गएको हुँदा नर्भिकले उक्त दिवस नेपाल हार्ट नेटसँगको संयोजनमा शनिवार मनाएको हो । विश्व मुटु महासंघको आह््वानमा हरेक वर्ष सेप्टेम्बर...
नाबालिका मृत्युप्रति नर्भिकको प्रष्टीकरण–‘अस्पतालको कमजोरी छैन, यस्तो छ यथार्थ’
काठमाण्डौ । गत भदौ १३ गते मंगलबारका दिन नर्भिकको आकस्मिक कक्षमा प्रारम्भिक उपचारका क्रममा एक १६ महिने नाबालिका–भिक्टोरी आचार्यको निधन भएको बिषयमा नर्भिक इन्टरनेशनलले प्रष्टीकरण दिएको छ । घटनाको यथार्थलाई तोडमोड गरी नर्भिकको बिषयमा दुुष्प्रचार गरिएको भन्दै अस्पताल प्रशासनले आपत्ति प्रकट गरेको छ । ‘राज्यको चौथो अंगको...
बालबालिका मामिलासम्बन्धी एकजना ब्रिटिश आयुक्तले अभिभावकहरुले आफ्ना सन्तानलाई सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटमा बढी समय बिताउनबाट रोक्नुपर्ने सुझाव दिएकी छन्। अब्जर्भर पत्रिकालाई दिएको अन्तरवार्तामा एन लङफिल्डले बालबालिकाको बढी समय बिताउन भनेर ठूला सामाजिक सञ्जालहरुले अवलम्बन गरिरहेका विधिको ‍आलोचना गरिन्। उनले बिदाको समयमा...
स्कटल्याण्डमा गरिएको एउटा अनुसन्धानले सुनका सूक्ष्म कणको प्रयोगबाट क्यान्सरविरुद्धको औषधिको प्रभावकारिता बढ्न सक्ने देखाएको छ। जर्मनीको एउटा वैज्ञानिक जर्नलमा प्रकाशित अनुसन्धान प्रतिवेदनमा त्यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। एडिनबरा विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरुले 'जेब्राफिश' प्रजातिको माछाको मस्तिष्कमा राखिएको सुनको सूक्ष्म...
१. नियमित व्यायाम नियमित व्यायामले तौल घटाउन सहयोग गर्नुका साथै इन्सुलिनको तीब्रता वृद्धि गर्छ । इन्सुलिन तीब्रताको अर्थ तपाईको शरीरको ब्लडस्ट्रिममा पर्याप्त सुगरको उपयोग गर्ने भन्ने अर्थ लाग्छ । व्यायामले तपाइको मांसपेशीलाई उर्जाका लागि ब्लड सुगर उपयोग गर्न सहयोग गर्छ । तौल उचाल्ने, फटाफट हिड्ने, दौडने, वाइकिङ, नाच्ने, हाइकिङ, स्विमिङ...
यदि तपाईं अधिकांश व्यक्तिजस्तै नियमित रुपमा व्यायाम गरी पसिना बगाउन खासै जाँगर चलाउनु हुन्न भने व्यायाम गर्न तपाईंलाई पर्याप्त उत्प्रेरणाको कमी छ भन्ने बुझ्नुहोस्। अहिले ‘टाइम’ म्यागाजिनका लागि कभर स्टोरी ‘द एक्सरसाइज क्योर’ लेखिरहँदा २० प्रतिशत अमेरिकीहरूले मात्र उनीहरूलाई दिइएको परामर्श अनुसार साताको १ सय ५० मिनेटको भारी...
न्युयोर्क। सामान्यतया हामी जीवनको एक तिहाइ समय बिछ्यौनामा (बेड)मा बिताउँछौँ। यस्तो महत्वपूर्ण बिछ्यौना छिट्टै नै अनेकौँ खालका ‘ब्याक्टेरिया’ र ‘फङ्गस’को ‘बोटानिकल गार्डेन’ बन्छ भन्छन् न्युयोर्क विश्वविद्यालयका माइक्रोबायोलोजिस्ट फिलिप टियर्नो। टियर्नोले एउटै तन्ना (बेडसिट) लामो समय लगातार प्रयोग गर्दा वा छिट्टै...
लन्डन । बेलायतको किङ्स कलेज लन्डनमा गरिएको अनुसन्धानले बढी उमेरमा बुवा बन्नेहरुका छोरा ‘जिनियस’ (कुशाग्र-तीक्ष्ण मस्तिष्कका) हुने सम्भावना धेरै हुने देखाएको छ। अनुसन्धान अनुसार यस्ता बुवाका छोरा तीव्र र तीक्ष्ण बुद्धिका हुुुुन्छन्। तर, अध्ययनले यो निष्कर्षमा आमाको उमेरको कुनै प्रभाव नपर्ने देखाएको छ। साथै, छोरीहरूमा भने यसको कुनै...
दूध राम्रो कि दही ?
दूधलाई फर्मेन्टेसन गरी दही बनाइन्छ । यो क्रियालाई दूध सुरक्षित राख्ने एक विधिको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । किनकि दहीलाई केही दिनसम्म चिसोमा सुरक्षित राख्न सकिन्छ भने दूधलाई यसरी राख्दा बिग्रन्छ । दही बनाउने समयमा दूधमा प्रयोग गरिने जोडनको माध्यमबाट ल्याक्टोब्यासिल जीवाणु सक्रिय भई दूधमा रहेको ल्याक्टोज चिनीलाई ल्याक्टिक एसिडमा परिणत...
►रमेश गिरी भक्तपुर । बाबुआमाको कलेजोको टुक्रा हुन् छोराछोरी, छोराछोरीको कलेजोका टुक्रा हुन् बाबुआमा भन्ने भनाइलाई काठमाडौँ महानगरपालिका–१२, लगनटोलकी २४ वर्षीया सरिता महर्जनले चरितार्थ पारेकी छन्। मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र, भक्तपुरले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गत असार १८ गते आफ्नै कलेजो दिएर ५७ वर्षीय बाबु...
१. तनाव निर्मूल पार्नुहोस्ः अधिकांश महिला अनावश्यक रुपमा तनाव लिइरहेका हुन्छन्। तनावले प्रजनन् क्षमतादेखि डिप्रेसन, ‘एन्जाइटी’ र मुटुसम्बन्धी रोगको जोखिम बढ्छ। त्यसैले सकेसम्म तनाव लिनु हुँदैन। तनावरहित हुन हरदम कोसिस गर्नुपर्छ। तपाईंले लिएको तनावले तपाईंको काम बन्दैन बरु स्वास्थ्य बिगार्छ। आफूलाई तनाव नहुने उपाय खोज्ने र...
६० वर्ष कटेपछि गर्नुपर्ने ९ जाँच
डा. रमेश कँडेल, वृद्धवृद्धा रोग विशेषज्ञ, पाटन अस्पताल ‘होलबडी’ चेकअपका नाममा हुने स्वास्थ्य परीक्षणमा शरीरका सबै अंगको परीक्षण नगरिने भए पनि मुख्य अंगहरुको अवस्थाबारे जानकारी पाउन सकिन्छ । त्यसैले ‘मलाई रोगै लागेको छैन? मलाई के हुन्छ र? बिरामी भएपछि उपचार गराउँला’ जस्ता बाहाना बनाएर आफ्नो शरीरको चेकजाँच नगर्ने हो भने तपाईं थाहै...
१. परिवर्तन स्वीकार्नोस् जीवनलाई सुखद र स्वास्थ्यपूर्ण बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिला आफ्नो सोचमा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । यदि तपार्इंको दिनचर्या यान्त्रिक प्रकृतिको छ भने तपाईंमा अनेकौं समस्या देखिन सक्छन् । दिनभर कामको थकान, अव्यवस्थित खानपिन र काम सक्ने वित्तिकै ककटेलको साथले कहिँ कतै असर गरिरहेको हुनसक्छ । तपाईंकालागि...
निदाएकै बेला मृत्यु हुने खतरनाक रोग, यस्ता छन् कारण
विख्यात अमेरिकी फिल्म शृंखला ‘स्टार वार्स’की अभिनेत्री क्यारी फिसरको निधनको मुख्य कारण ‘स्लिप एप्निया’ रहेको चिकित्सकहरूले पुष्टि गरेका छन्। निदाएका बेला सास रोकिनुलाई डाक्टरी भाषामा ‘स्लिप एप्निया’ भनिन्छ । निदाएका बेला कैयौंपल्ट केही सेकेन्डका लागि सास फेर्न रोकिन्छ। ६० बर्सकी फिसरको गत वर्ष डिसेम्बर २७ मा निधन भएको...